Soosaarayaasha waxsoosaarka iyo warshadeynta awooda dabaysha ugu fiican | Hadal
Halbeegyada Waxyaalaha Model 101 ~ 130 Xawaaraha wareega ee la ogolaan karo (r / min) 500 ~ 4000 toyque Magacyo (Nm) 630 ~ 280000 Sharaxa Waxsoosaarka Dabaysha awoodda guud ee isku xidhka Dabaysha isku xidhka dabaysha ayaa leh faa iidada is haysta, daqiiqad yar oo firfircoonaan ah, shaqo lagu kalsoon yahay, qaadista awoodda iyo qaddar yar oo waxqabadka magdhowga ah. Marka la barbardhigo noocyada kale ee isku xidhka, waxay leedahay gudbinta ugu sarreysa ee xaddiga isku cabirka ah. Si ballaaran ayaa loogu adeegsaday birta, macdanta, bu ...
Xawaaraha wareega ee la oggol yahay (r / min)
Toyque magac (Nm)
Awooda dabaysha oo isku xidhka guud waxay leedahay faa iidada is haysta, daqiiqad yar oo firfircoonaan ah, shaqo lagu kalsoonaan karo, awood qaadid iyo qadar yar oo waxqabadka magdhawga ah. Marka la barbardhigo noocyada kale ee isku xidhka, waxay leedahay gudbinta ugu sarreysa ee xaddiga isku cabirka ah. Si ballaaran ayaa loogu isticmaalay macdanta, macdanta, qalabka dhismaha, kiimikooyinka, batroolka, gaadiidka, dharka iyo warshadaha kale.
Isku-xidhka qalabka, heerkulka deegaanka shaqada -20 illaa + 80, wareejinta magacaaban ee loogu talagalay 0.4 illaa 4500kNm, xawaaraha la oggol yahay ee 4000 ilaa 460r / min, kala-ballaca wiishka 16 ilaa 1000mm.
Xarunta tijaabada tamarta dabaysha iskuxirka guud
Tijaabada awoodda dabaysha ee isku xidhka guud sidoo kale magaca isku xidhka kaararka, muuqaalka ugu muhiimsan ayaa ah inay isku xidhi karto laba fallaadh oo ku yaal meel aan fiicnayn, waxayna ku wadi kartaa kalsooni sarreysa xagga wareegga iyo gudbinta wareegga. Waxay leedahay faa'iidada isafgarad, daqiiqad yar oo aan firfircooneyn, buuq la'aan, hawlgal xasiloon, nolol dheer, shaqo lagu kalsoon yahay, awood qaadis iyo qaddar weyn oo magdhow xagal ah. Marka la barbardhigo noocyada kale ee isku xidhka, waxay leedahay gudbinta ugu sarreysa ee xaddiga isku cabirka ah. Si ballaaran ayaa loogu isticmaalay metallurgy, sameynta birta, wiishka iyo mashiinka gaadiidka, macdanta, qalabka dhismaha, kiimikooyinka, batroolka, maraakiibta, mashiinka masraxa, awoodda dabaysha, dharka iyo warshadaha kale.
Tijaabada korontada dabaysha isku xidhka guud wuxuu leeyahay SWC (fargeeto dhan), SWP (taageerada kala qaadista kala goynta), noocyada SWZ (taageerada oo dhan) oo ku saleysan nooca go'an.
Iyada oo ku saleysan nooca saxanka dhamaadka go'an, waxaa jira dhamaadka flange la muhiimka ah, ilkaha dhamaadka, hawlgelinta ilkaha, ururinta si dhakhso ah iyo iwm, habka isku xidha ee wadista ama usheeda dhexe ee la wado ayaa leh dhululubo leh furaha, silsilad aan lahayn fure, oo aan godka wareega iyo iwm. dhexroorka flange wuxuu ka weynaan karaa dhexroorka wareega.
Isku-xidhka qalabka, jawiga shaqada heer-kulka -20 illaa + 80, wareejinta magacaaban ee loogu talagalay 0.4 illaa 45000kNm, xawaaraha la oggol yahay ee 4000 ilaa 460r / min, kala-ballaca wiishka u dhexeeya 16 illaa 2000mm.
Hore: Qaybo ka mid ah qalabka geesaha
Xiga: varibloc gearbox
Isku-xidhka qalabka korontada